ဆလိုက်ရှိုးကိုဖန်တီးရန်အစီအစဉ်ကို - PROGRAM တစ်ခုရွေးချယ်ခြင်း - 2019
အသစ်တစ်ခုကိုကွန်ပျူတာဝယ်ယူပြီးနောက်အသုံးပြုသူမကြာခဏ operating system ကို, လိုအပ်သော software ကို download လုပ်နဲ့တပ်ဆင်ခအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်လွှဲပြောင်းတပ်ဆင်၏ပြဿနာနှင့်အတူရင်ဆိုင်သည်။ အခြားကွန်ပျူတာဟာ operating system များကိုအသုံးပြုနိုင်လျှင်ဒီခြေလှမ်း, ကျော်သွားနိုင်ပါတယ်။ Next ကိုကျနော်တို့အခြားစက်မှ Windows 10 ကိုရွှေ့ပြောင်းရဲ့ features တွေကိုစဉ်းစားပါ။
အခြား PC ပေါ်မှာ Windows 10 ကိုလွှဲပြောင်းရန်ကဘယ်လို
"တစ်ဆယ်" ၏တီထွင်မှုတစ်ခုမှာ, ဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ထားရန် binding ရိုးရှင်းသော backup လုပ်ထားအောင်နှင့်အခြား system ပေါ်တွင်ကစေလွှတ်၏ operating system ကိုလုံလောက်အောင်မရဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတော်တော်များများအဆင့်ဆင့်ပါဝင်သည်:
Bootable media တစ်ခုလုပ်ရအောင် Creating;
ရဲ့ backup လုပ်ထားနှင့်အတူပုံရိပ်တစ်ခု Creating;
အသစ်တစ်ခုကိုစက်မှ backup တစ်ခုစေလွှတ်။
အဆင့် 1: Bootable media တစ်ခုလုပ်ရအောင် Create
အဆိုပါ Bootable media တစ်ခုလုပ်ရအောင်စနစ်ပုံရိပ်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ဖို့လိုအပျသောကွောငျ့ဤအဆင့်, အရေးအပါဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက် Windows များအတွက်အများအပြားအစီအစဉ်များရှိပါသည်။ မရကြလိမ့်မည်ကိုသူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုငါတို့အဘို့အပိုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ AOMEI Backupper နျ Standard ကဲ့သို့သောသေးငယ်တဲ့ application ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ကော်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍများအတွက် feature-ကြွယ်ဝသောဖြေရှင်းနည်းများရုံဖြစ်ကြသည်။
AOMEI Backupper နျ Standard Download
app ကိုဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်, main menu ကိုသွားပါ "အသုံးအဆောင်များ"အမျိုးအစားပေါ်ထားတဲ့ကလစ်အတွက် "Bootable media တစ်ခုလုပ်ရအောင် Create".
စစ်ဆေးမှုများ point ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်း၏အစအဦးမှာ "Windows ကို PE" နှင့်စာနယ်ဇင်း "Next ကို".
ဤတွင်ရှေးခယျြမှုကြောင့်စနစ်လွှဲပြောင်းရန်စီစဉ်ထားသည်အဘယ်မှာရှိကွန်ပျူတာပေါ်တွင် install လုပ်ပြီး BIOS ကိုအဘယ်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပါသည်။ သငျသညျပုံမှန်သတ်မှတ်လျှင်, select လုပ်ပါ "အမွေ bootable disk ကို Create", UEFI BIOS ကို၏ဖြစ်ရပ်အတွက်သင့်လျော်တဲ့ option ကိုရွေးချယ်ပါ။ က Standard-ဗားရှင်းအတွက်နောက်ဆုံးအပိုဒ်ကနေအမှတ်အသား Check မဖယ်ရှားနိုင်ပါ, ဒါခလုတ်ကိုကိုသုံးပါ "Next ကို" ဆက်လက်။
ဒီနေရာမှာတိုက်ရိုက်-image ကိုများအတွက်မီဒီယာကို select: တစ်ခု optical disc ကို, ကို USB flash drive ကိုသို့မဟုတ် HDD ထဲမှာသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရာအရပျ။ မာကုလိုချင်သော option ကိုနှင့်စာနယ်ဇင်း "Next ကို" ဆက်လက်။
created ခံရဖို့ backup လုပ်ဘို့စောင့်ဆိုင်း (ထည့်သွင်း applications များ၏နံပါတ်ပေါ်မူတည်ပြီးကြောင့်အချိန်အနည်းငယ်ကြာဖြစ်နိုင်သည်), နှင့်စာနယ်ဇင်း "Finish ကို" လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြည့်စွက်ရန်။
အဆင့် 2: စနစ်၏ဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများ Unbinding
အဘယ်သူမျှမလျော့နည်းအရေးကြီးသောခြေလှမ်း - (လာမယ့်အပိုင်း၌အကြောင်းကိုပိုမို) backup လုပ်ထား၏ပုံမှန်ဖြန့်ကျက်ပေးလိမ့်မည်သည့်သံထံမှ otvyazka OS ကို။ ဤသည်တာဝန်, Sysprep utility ကို run ဖို့စနစ် tools တွေကို windose များထဲမှကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သီးခြားဆောင်းပါးထဲမှာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခင်ကဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, "ပြတင်းပေါက်" ၏အားလုံးဗားရှင်းများအတွက်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
အသေးစိတ်: က Windows Sysprep utility ကိုမှတဆင့်သံထံမှ otvyazki
အဆင့် 3: ဖွေလှတျ OS ကိုတစ် backup လုပ်ထား Create
ဒီအဆင့်မှာကျနော်တို့ကိုတဖန် AOMEI Backupper လိုအပ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျ backup လုပ်ထားဘို့ကိုအခြားလျှောက်လွှာကိုသုံးနိုင်သည် - သူတို့အတူတူမူအရအလုပ်လုပ်ဖို့နှင့် interface နဲ့ရှေးခယျြစရာအချို့ရှိနိုင်ပါသာကွာခြား။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုစတင်ရန်, အ tab ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Backup ကို" နှင့် option ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "System ကို Backup ကို".
အခုတော့စနစ် installed သောပေါ်မှ drive ကို select လုပ်ပါ - ပုံမှန်အားဖြင့် ကို C: .
နောက်ပိုင်းဒီတူညီတဲ့ window ထဲတွင်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ backup လုပ်ထား၏တည်နေရာကိုသတ်မှတ်။ HDD တွေနဲ့လွှဲပြောင်းစနစ်၏အမှု၌, သင်သည်မည်သည့် Non-system ကိုအသံအတိုးအကျယ်ရွေးနိုင်သည်။ သငျသညျသစ်တစ်ခု drive ကိုအတူစက်မှလွှဲပြောင်းရန်စီစဉ်ပါကအမြောက်အများမှတ်ဉာဏ်ချောင်းကိုသို့မဟုတ်ပြင်ပက USB-disk တွေ၏အားသာချက်ယူတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ လက်ျာဘက်, စာနယ်ဇင်းလုပ်နေတာ "Next ကို".
အဆိုပါစနစ်၏ပုံရိပ်ကိုထူထောင်ကြလိမ့်မည်သည်အထိစောင့်ဆိုင်း (လုပ်ငန်းစဉ်အချိန်, တဖန်, အသုံးပြုသူအချက်အလက်များ၏ပမာဏပေါ်မူတည်) နှင့်လာမည့်ခြေလှမ်းသွားရောက်လည်ပတ်မည်။
အဆင့် 4: စေလွှတ် backup လုပ်ထား
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်လည်းသူ့ဟာသူအတွက်ရှုပ်ထွေးဘာမျှမဟုတ်ပေ။ တစ်ခုတည်းသောအတွက်အသိပေးချက် - backup လုပ်ထား၏ဖြန့်ကျက်နေစဉ်အတွင်းအာဏာကျရှုံးအဖြစ် charger ကိုမှအလိုဆန္ဒတခုမပြတ်မတောက် power supply နဲ့ချိတ်ဆက် desktop ပေါ်ကနှင့် Laptop ကို crash နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အဆင့် 1 သို့ပြန်လာဖန်တီးပေးသော CD သို့မဟုတ် USB drive ကနေ boot, အဲဒီနောက် bootable မီဒီယာကချိတ်ဆက်ဖို့ကို set up ပစ်မှတ်ကို PC သို့မဟုတ် Laptop ကို, တွင် - သိမ်းဆည်းထား AOMEI Backupper ကို download လုပ်ပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ အခုတော့ backup လုပ်ထားထိန်းသိမ်းထားသောစက်တင်သင်္ဘောမှချိတ်ဆက်ပါ။
အဆိုပါ application ကိုမှဆက်လက်ဆောင်ရွက် "Restore"။ ခလုတ်ကိုသုံးပါ "Path ကို"backup လုပ်၏တည်နေရာကိုသတ်မှတ်ရန်။
အောက်ပါစာတမ်းအတွက်ပဲ click နှိပ် "Yes" ကို.
ထဲမှာ "Restore" အနေအထား program ကို backup လုပ်ထားတင်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ကိုရွေးချယ်ပါ, ထို option ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌တစ်ဦးစစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသားနေရာ "အခြားတည်နေရာ system ကို Restore" နှင့်စာနယ်ဇင်း "Next ကို".
ဘေးကပုံရဲ့ပွနျလညျထူထောငျဆောင်ခဲ့ဦးမည်သောအပြင်အဆင်အတွက်အပြောင်းအလဲနှင့်စာနယ်ဇင်းဖတ်ပါ "Restore Start" ဖြန့်ကျက်လုပျထုံးလုပျနညျးကိုစတင်ရန်။
သင့်အနေဖြင့်အပိုင်း၏အသံအတိုးအကျယ်ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည် - က backup လုပ်ထားပစ်မှတ် partition ကိုများထက်ပိုမိုကြီးမားအခါတစ်ဦးလိုအပ်သောခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်တစ်ခုကိုကွန်ပျူတာစနစ်ကတစ်ဦး solid state drive ပေးထားသည်ဆိုပါကထို option ကိုသက်ဝင်ရန်အကြံပြုသည် "SSD ကိုများအတွက်ပိုကောင်းအောင် partitions ကိုညှိရန် '.
လျှောက်လွှာရွေးချယ်ထားသောပုံရိပ်ကနေ system ကိုပြန်ပေးမည်သည်အထိစောင့်ပါ။ စစ်ဆင်ရေးပြီးနောက်ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါလိမ့်မယ်, သင်တူညီတဲ့ applications များနှင့်အချက်အလက်နှင့်သင်၏ system ကိုရလိမ့်မယ်။
ပင်အတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူများကိုကိုင်တွယ်နိုင်အောင်အခြားကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Windows 10 ကိုလွှဲပြောင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း, မည်သည့်တိကျသောကျွမ်းကျင်မှုမလိုအပ်ပါဘူး။